united finance limited(united finance limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
युनाइटेड फाइनान्स प्राप्ति गरेको नबिलले असार २७ बाट एकीकृत कारोबार गर्ने
काठमाण्डौ । युनाइटेड फाइनान्सलाई प्राप्तिपछि नबिल बैंक लिमिटेडले आउँदो असार २७ गतेबाट एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने भएको छ। नबिल बैंक सञ्चालक समितिको हिजो आइतबार बसेको बैठकले एकीकृत कारोबार असार २७ गतेबाट सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। राष्ट्र बैंकले गत असार १५ गते १ः०.३५ सेयर स्वाप अनुपातमा युनाइटेड फाइनान्सलाई प्राप्ति गर्न नबिल...
काठमाण्डौ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका एक भेटेरान बैंकर तथा स्पष्टवक्ता अजयकुमार मिश्रले अवकाशको घोषणा गरेका छन् । पछिल्लो समय यूनाइटेड फाइनान्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कार्यरत बैंकर मिश्रले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रबाटै अवकाश लिएको घोषणा गरेका हुन् । देशकै सबैभन्दा ठूलो र सवल वित्तीय संस्थाको रुपमा रहेको नवील बैंकसँग...
प्राप्ति प्रक्रिया टुंग्याउन नबिल बैंक र युनाइटेड फाइनान्सले डाके एकैदिन विशेष साधारणसभा
काठमाण्डौ । प्राप्ति प्रक्रिया टुंग्याउन नबिल बैंक र युनाइटेड फाइनान्स लिमिटेडले एकैदिन विशेष साधारणसभा डाकेका छन्। नबिल र युनाइटेडले आउँदो असार ५ गते विशेष साधारणसभा डाकेका हुन्। दुवैको सभा काठमाण्डौ दरबारमार्गस्थित आआफ्नै प्रधान कार्यालयमा भर्चुअल माध्यमबाट बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ। दुवै सभाले प्राप्ति प्रयोजनका लागि...
हिमालयन–इन्भेष्टमेन्ट र नवील–यूनाइटेडको मर्जरलाई राष्ट्रबैंकको एलओआई
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंक तथा नवील बैंक र यूनाइटेड फाइनान्सबीचको जारी मर्जर प्रक्रियालाई लेटर अफ इन्ट्रेस्ट(एलओआई) दिने निर्णय गरेको छ । नेपाल राष्ट्रबैंकको आज बसेको बोर्ड बैठकले यी चार संस्थालाई मर्जरका लागि एलओआई दिने निर्णय गरेको हो । राष्ट्रबैंक स्रोतका अनुसार एलओआई पाएपछि अब यी...
नबिलमा विलय हुने सम्झौता गरेको युनाइटेड फाइनान्सको सेयर कारोबार रोक्का
काठमाण्डौ । नबिल बैंकमा विलय हुने सम्झौता गरेको युनाइटेड फाइनान्स लिमिटेडको सेयर कारोबार रोक्का गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले आज सोमबारदेखि लागू हुने गरी युनाइटेड फाइनान्सको सेयर कारोबार रोक्का गरेको हो। नेप्सले बैंक तथा वित्तीय संस्था आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी विनियमावली, २०७३ को विनियम ६ (१) बमोजिम यो...
युनाइटेड फाइनान्सद्वारा मणिग्राम र तानसेनमा शाखा विस्तार
काठमाण्डौ । भारतको प्रतिष्ठित कम्पनी मुथुट फाइनान्सको लगानी रहेको युनाइटेड फाइनान्स लिमिटेडले रुपन्देहीको मणिग्राम र पाल्पाको तानसेनमा शाखा विस्तार गरेको छ। फाइनान्सले मणिग्राहमा २५ औँ र तानसेनमा २६ औँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो। मणिग्राम शाखाको उद्घाटन उद्योग वाणिज्य संघ तिलोत्तमाका अध्यक्ष गुणानिधि भण्डारी (माधव) र युनाइटेड...
युनाइटेड फाइनान्सको २४ औं शाखा धनगढी
काठमाण्डौ । युनाइटेड फाइनान्स लिमिटेडले सुदूरपश्चिम प्रदेशकै पहिलो शाखाका रुपमा कैलालीको धनगढीमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ। फाइनान्सले बिहीबारदेखि धनगढीको चौराहामा आफ्नो २४ औँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो। बिहीबार आयोजित उद्घाटन समारोहमा उद्योग वाणिज्य महासंघ कैलालीका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवर र फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी...
काठमाण्डौ । युनाइटेड फाइनान्स लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म २ करोड ४३ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा कम्पनीको नाफा गत वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा ४०.९५ प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म कम्पनीले ४ करोड ११ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो। समीक्षा अवधिसम्म...
यस्तो रहेछ यूनाइटेड फाइनान्सले लाभांश वितरण नगर्नुको अन्तर्य
काठमाण्डौ । नवील बैंकसँग मर्जमा जान खोजे पनि सेयर स्वाप अनुपात र संचालक समितिमा प्रतिनिधित्वको विषयमा कुरा नमिलेपछि पछाडि हटेको यूनाइटेड फाइनान्सका लगानीकर्ताको यसपटक खालि हात भएको छ । राम्रै प्रतिफलको आशामा यो कम्पनीको सेयरमा लगानी गरेकाहरु कम्पनीको तर्फबाट यो वर्ष कुनै लाभांश नदिने निर्णयका कारण निराश देखिए । कम्पनीको संचालक...
यूनाइटेड फाइनान्स यो वर्ष लाभांश नदिने
काठमाण्डौ । यूनाइटेड फाइनान्स लिमीटेडले सेयरधनीलाई कुनै पनि लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनीको मंसिर २४ गते बसेको संचालक समितिको २५५ औं बैठकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सञ्चित मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीले संस्थाको वित्तीय अवस्था थप सवल तथा सशक्त बनाउन कुनै लाभांश वितरण नगर्ने...
काठमाण्डौ । यूनाइटेड फाइनान्सका संचालक समिति अध्यक्ष तथा प्रतिष्ठित उद्योगी बसन्तकुमार चौधरीले नवील बैंकसँग मर्जमा जाने समाचारको विषयमा मुख खोलेका छन् । बिजशालासँग कुरा गर्दै अध्यक्ष चौधरीले नेपाल राष्ट्रबैंकले क्रसहोल्डिङ रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जमा लैजाने नीति लिएको र त्यसको आफूहरुले पनि पालना गर्ने उल्लेख...
यूनाइटेड फाइनान्सलाई प्राप्ति गर्ने प्रयासमा नवील बैंक, राष्ट्रबैंकमा पुग्यो सूचना
काठमाण्डौ । राष्ट्रबैंकले क्रसहोल्डिङ रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सबैभन्दा पहिला मर्जरमा लग्ने नीति लिएसँगै दवाबमा परेका त्यस्ता संस्थाहरु संभावित मर्जरको आपसी छलफलमा जुटेका छन् । यो क्रममा फाइनान्स कम्पनीमध्येकै बलियो यूनाइटेड फाइनान्स लिमीटेड निजी क्षेत्रबाट संचालित वाणिज्य बैंकमध्येकै बलियो नवील बैंक लिमीटेडसँग...
यूनाइटेड फाइनान्सको प्रगतिमा कोरोना प्रभाव, निक्षेप र कर्जा परिचालनमा बढोत्तरी
काठमाण्डौ । यूनाइटेड फाइनान्स लिमीटेडले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चौथो त्रैमाससम्म ९ करोड ५० लाख नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिसम्म ९ करोड ९९ लाख नाफा आर्जन गरेको थियो । यो कम्पनीको नाफामा समेत कोरोनाको प्रभाव देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा यूनाइटेड फाइनान्सको संचालन मुनाफा १७ करोडबाट घटेर १३ करोड ५९ लाखमा सीमित बन्न पुगेको...
‘सीइओको तलब र सेवाशुल्कमा माइक्रोम्यानेजमेन्ट नगरिदिएको भए हुन्थ्यो’
-अजयकुमार मिश्र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत-यूनाइटेड फाइनान्स कोभिड १९ का प्रभावका बीच मौद्रिक नीति आयो । निजी क्षेत्र मौद्रिक नीतिबाट उत्साहित भएको देखियो । तपाईको विचारमा मौद्रिक नीतिले अहिलेको समस्या सम्बोधन गर्न सक्यो ? नीति कत्तिको समय–सान्दर्भिक लाग्यो ? -अहिलेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र जोगाउन मूलभूत रुपमा मौद्रिक नीतिले...
गोल्डलोनमा आक्रामक बन्दै यूनाइटेड फाइनान्स
काठमाण्डौ । यूनाइटेड फाइनान्स लिमीटेड गोल्डलोन(सुन धितोकर्जा)को बिस्तारमा आक्रामक बन्ने भएको छ । गोल्डलोनकै कारण विश्वमा चिनिएको भारतको मुथुट फाइनान्सले समेत लगानी गरेपछि यूनाइटेड फाइनान्स गोल्ड लोनमा आक्रामक बन्ने देखिएको हो । अहिले यो फाइनान्सले गोल्ड लोन सम्बन्धी प्रडक्टलाई तीव्र प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । पछिल्लो समय...